သဘောကျမိသောစာစုလေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » သဘောကျမိသောစာစုလေးများ	3
Posted by Foolish Girl on Aug 31, 2016 in My Dear Diary |3comments
But I can give my “Hand” to “Some” one who need help.
Beauty is on heart, not on face.
“စေတနာသည် လူတိုင်းနဲ. မတန်” သည် မဟုတ် · ·
လူတိုင်းနဲ. တန်တဲ. စေတနာမျိုးဖြစ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
တီကောင်း ကို ပေးသည် သိုသော်…
အသိုက်ထဲသို့ အရောက်ချပေးမည် မဟုတ်ပါ…။။
Thint Aye Yeik says: ဒသနလည်း… ရတာပဲကိုး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: ဘ၀ကသင်ပေးတာပါ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဒဿနလေးတွေ ကောင်းတယ်။ အမဆို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဒဿနတစ်ခုကို စာအုပ်အဖုံးပေါ်မှာ ရေးထားတယ်။ အဲဒီ စာတစ်ကြောင်းက ကိုယ့်ကို အများကြီး ထိန်းမတ်ပေးခဲ့တယ်။